साढेसाती तथा अढैया दशा भनेको कस्तो दशा हो ? | Mero Jyotish
साढेसाती तथा अढैया दशा भनेको कस्तो हो र यसको फल कस्तो हुन्छ ?
के हो शनिको साढेसाती र अढैया दशा ?
पुराणका अनुसार शनि सूर्यका छोरा हुन् र संसारका हरेक प्राणीलाई आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसारको फल दिनका लागि एकमात्र न्यायाधीशको काम गर्न खटिएका देवता हुन् । तसर्थ शनिको दृष्टिमा कोही आफ्नो र कोही पराया छैन । पौराणिक कथाहरुमा भगवान् शिवलाई समेत शनि लागेका कथा प्रसंग आउनाले पनि शनिको शक्तिको अनुमान गर्न सकिन्छ । जब शनिग्रह एक राशिबाट अर्को राशिमा गोचर गर्छन्, त्यसबेला कुनै राशिलाई साढेसाती लागेको हुन्छ । उदाहरणका लागि यदि शनि ग्रह मेष राशिमा छ भने मेष राशिका मानिसलाई मध्य मेषभन्दा एक अगाडिको राशि मीनलाई अन्त्य र मेषभन्दा एक पछाडिको राशि वृषलाई आद्य साढेसातीको दशा लाग्छ । त्यस्तै, यो अवस्थामा मकर राशिलाई सुरुको र कन्या राशिलाई दोस्रो अढैया लाग्छ । ज्योतिषीय नियम अनुसार आद्यभन्दा मध्य र मध्यभन्दा अन्त्य साढेसाती कडा हुन्छ । त्यस्तै, सुरुको भन्दा अन्त्यको अढैया बढी कडा हुन्छ ।
साढे साती तथा अढैयाको प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय
यस्तो अवस्थामा साढेसाती तथा अढैया लागेका राशिका मानिसको जीवनमा महत्वपूर्ण उतारचढाव आउने कुरा एकातिर ज्योतिषशास्त्रले बताउँछ भने अर्कोतिर विभिन्न अनुसन्धानहरुले पनि यो कुराको पुष्टि गरेका छन् । तर शनिको साढेसाती र अढैया सबैलाई खराब चाहिँ हुन्न । व्यक्तिको जन्म कुण्डलीमा शनि ग्रहलाई हेरेर मात्र दशाफल बताउन सकिन्छ । कसैलाई यी दशा समयहरु असाध्यै राम्रो पनि हुन सक्छन् । सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा शनि भएको ठाउँमा ७ को अंक भएमा वा लग्नबाट तेस्रो, छैटौं र एघारौं कोठामा बलवान् शनि ग्रह बसेको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई यी दशाहरु शुभफलदायी हुन्छन् । जसबाट मानसम्मान बढ्ने, मेलमिलापमा वृद्धि, रोजगारीमा पदोन्नति, घरजग्गा जोडिने आदि शुभफल हुन्छ । यदि ती स्थानमा शनि छैन भने ती व्यक्तिको शनि खराब हुन सक्छ र दशाको फल प्रतिकूल हुन्छ ।
माथि भनिएझैं साढेसाती तथा अढैया हामीले सोचे जस्तो आफैंमा खराब हुँदैन । तर पनि ज्योतिषीय मान्यतामा शनि पाप र दुःखदायी ग्रह भएकाले यसको प्रभाव मानिसको जीवनमा नकारात्मक नै हुन्छ । बढी खर्च हुने, काम ढिला हुने, मानसिक अशान्ति, र वाहनबाट दुःख हुने शनिका मुख्य प्रभावहरु हुन् । यसको राम्रो र खराब पक्ष थाहा पाउन ज्योतिषीसँग परामर्श लिनुपर्छ ।
यदि जन्म समयमा शनि खराब रहेछ भने पनि त्यसको प्रतिकूल प्रभावबाट बच्ने वा न्यूनीकरण गर्ने उपायहरु शास्त्रले बताएको छ । यदि खराब साढेसाती वा अढैया छ भने त्यस्तो अवस्थामा केही उपाय गरेर प्रतिकूल प्रभावबाट बच्न सकिन्छ । यसको मतलव यी कुराहरु ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास गर्ने जोकोहीले मान्नुपर्ने कुरा हुन् । ती उपायहरु वैदिक वा तान्त्रिक मन्त्रोपचार विधि, यन्त्र विधि, रत्न धारण विधि वा अरु पूजापाठका उपचार विधि हुन सक्छन् । मन्त्रोपचार विधिमा निश्चित समयमा मन्त्र जप गर्ने र गराउने तथा दान धर्मका कुरा आउँछन् भने यन्त्र र रत्नचाहिँ धारण गर्नुपर्छ । शनिको रत्न नीलम हो । यी उपायहरु ज्योतिषीको परामर्श अनुसार गर्नुपर्छ ।